SnapChat Ma Noqon Kartaa Tallaabada Xigta ee Socdaalka Iibsadahaaga?
Thursday, April 16, 2015 Axad, Janaayo 15, 2017 Tim Hickle
Siyaabo badan, tani waxay kuxirantahay qofka macmiilkaagu yahay iyo safarkoodu wuxuu yahay.
Qof kastaa wuu ogyahay Snapchat waqtigan, sax? Ma jiraa qof wali mugdi ku jira kan? Hadday sidaas tahay, waa kuwan waxa aad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato… Waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ugu caansan ee da'doodu u dhexeyso 16 - 25 sano jir, waxaa habboon in lagu xantaa $ 5 Bilyan, iyo waxay dareemeysaa inaysan cidina lacag ka samaynaynin.
Hadda, qayb ka mid ah tani waa qaabeyn. Waxaa jira dhowr meelood oo kaliya oo aad runtii ku xayeysiin karto Snapchat, dhammaantoodna waa wax aad u xun. Waxaad ku bixin kartaa xayeysiiska "Sheekooyinka Tooska ah," oo asal ahaan waxaad kaheleysaa 10 ilbiriqsi oo horudhac ah oo ay isticmaaleyaashu iska guji karaan iyaga oo aan sugin haba yaraatee. Waxaad ku xayeysiin kartaa astaantooda cusub ee "Discover", oo diyaar u ah inay carqaladeyso habka wararka iyo maaweelada ee u dhexeeya CNN iyo Comedy Central ay u sii daayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Labadan ikhtiyaarba waa kuwo aad u xun illaa aad doonaysid koror dhab ah oo qaali ah oo runtii aan la saadaalin karin oo ku saabsan wacyiga sumadda.
Su'aasha aan cidina is weydiineynin, in kastoo, sidee baan ugu dhex dari karnaa Snapchat waxa aan ogaan horeba u shaqeeyaa? Dad badan ayaa wax uga qoraya shabakadda bulshada isbeddel (qalad) kuwa badanna waa cabsi ka ciyaarista shabakada maxaa yeelay ma fahmin (qalad weyn). Tani waa sababta ay dadku u bixiyaan carruurta nacaska ah ee aniga oo kale ah inay soo galaan oo ay la ciyaaraan tikniyoolajiyadan cusub, waana ahay yaabay in dad badani aysan ogaan waxa ay ku hayaan farahooda - macno ahaan.
Waxaan ka fekeri karaa ilaa iyo toban warshadood - oo ay kujiraan nolosha habeenkii, maqaayadaha, iyo tafaariiqda maxalliga ah - oo si aad ah uga faa'iideysan kara ka mid noqoshada xubno bilaash ah ee 'Snapchat' ee istiraatiijiyadooda suuq geyn, wax walbana waxay ku laaban yihiin Kitaabka Quduuska ah in dhammaan suuqleyda dijitaalka ahi u hoggaansamaan journey Safarka iibsadaha.
Socdaalkii Iibsade Dhaqameedka
Hadaad aqoon u leedahay inaad wax aqriso Martech Zone, Waan hubaa inaad wax walba ka ogtahay safarka iibsadaha dhaqanka. Khibradaha macaamiisha oo dhan waxaa lagu muujiyey qaabkani inuu yahay go'aan caqli gal ah, oo macquul ah oo uu sameeyay go'aan qaade macquul ah. Marka hore, macaamilku wuu ogaadaa inay dhibaato leeyihiin, ka dib waxay bilaabayaan baaritaanka xalalka, ka dib waxay wax badan ka bartaan xalkaaga, ka dib way iibsadaan, ka dib waxay u noqdaan u doodaya. Waxay umuuqataa mid nadiif ah, aad ufudud. Ku dhowaad aad u nadiif ah oo aad u fudud…
Taasi waa sababta oo ah Booska B2B, waa aad khuseeya. Booska B2C waa mararka qaarkood khuseeya, laakiin waxay aad ugu egtahay sharciga suulka marka loo eego qaaciddada dhabta ah. Marka sidee ayaad ula qabsan kartaa qaanuunka suulka si uu ugu habboonaado Snapchat hawsha?
Hagaajinta Safarka Jiilka Soo Socda
Aynu ku bilowno waxa jiilka ah. Halkan uma joogo inaan ku qoro gabal kale oo isbeddel ah oo ku saabsan sida loogu suuq geeyo millennials-ka. Kuwaasi waxaa u badan qoraa dad aad u da ’weyn oo na fahmi kara ama aad u yar si ay u fahmaan ganacsiga, aniguna dan kama lihi. Intaas markii la sheegay, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya sida dadka da'da yar ay u cunaan macluumaadka iyo sida moodooyinka suuqleyda qaado waxay cunaan macluumaad.
Tusaale ahaan, millennials-ka guud ahaan waxay caan ku yihiin aaminaadda xayeysiinta. Taasi waa fududeyn weyn dad badana halkaas ayey ku joojiyeen. Waxa aan cidina weydiin ayaa ah kumanaan sano ayaan lahadleynaa?
Kuwa ugu caqliga badan ee leh lacagta ugu badani waxay aamin-daraan xayeysiinta, laakiin waxay jecel yihiin cilmi-baarista runtiina way jecel yihiin magacyada isku dayaya inay isweydaarsadaan iyaga la jira. Waxay ku koreen wadarta aqoonta aadanaha ee farahooda waxayna u isticmaalaan inay ku xalliyaan khamaarista baarista, ogaadaan dhuunta xanuunka, iyo go'aansiga halka ay ku bixinayaan lacagtooda. Kooxdan, caddeynta bulshada waa boqorka, wax kasta oo umuuqda ganacsi xad dhaaf ahna waxay u egtahay inay luminayaan rafcaankooda.
Marka tani waxay kicineysaa su'aasha muhiimka ah, sidee baan uga faa'iideysan karaa barxad aan ku taageerin xayeysiistayaasha inay u suuq geeyaan dadyow aan dooneyn in loo suuq geeyo?
Sahaminta Snapchat-ka ayaa aad uga sii dheer Snapchat Discover
Toddobaadyadii la soo dhaafay, kooxdayda Miles Design ayaa ahayd ku tijaabinaya suuq geynta Snapchat, waxaanan ka helnay fursado runtii aad u fiican oo ku saabsan barxadda oo gebi ahaanba bilaash ah oo leh awood ay si dhab ah u wadi karto ganacsiga, ma aha oo keliya aqoonsiga astaanta.
Qiyaas ahaan, tusaale ahaan, waxaad tahay baarar halgamaya sidii dhalinta 20-ka sano ay albaabada uga soo gali lahaayeen. Waxaa jira tanno ah xalal isku day-iyo-run ah oo dhibaatadan, oo ay kujiraan cabbitaano qaas ah oo qaas ah, habeeno khayaali ah, muusig toos ah, iwm., Laakiin qaar badan oo ka mid ah dhiirrigelintaan waxay ku tiirsan yihiin calaamadaha ka baxsan goobtaada marka loo eego nooc kasta oo xayeysiin ah. Kawaran hadaad ubaahantahay inaad dadka kuwada kaxayso wadar ahaan goobtaada si dhiiri galintaadu ay uhesho wax iibsi?
Waxyaabo yar ayaa gaar ah oo ku saabsan Snapchat sida shabakad bulsheed, oo ay ku jiraan geo-filtarrada. Hadda, Snapchat kuu oggolaan maayo inaad u abuurto shaashad-geo meheraddaada, laakiin iyagaa doono ha kuu abuurto shaandho-geo-deegaankaaga. Nidaamkani waa mid gebi ahaanba bilaash ah oo soconaya waqti aan la cayimin, taas oo macnaheedu yahay in wakhti kasta oo qof kuugu yimaado qoortaada kaynta, waxay isticmaali karaan geofilter-kaaga markaad Snapchatting asxaabtaada, ugu dambeyntii u kaxeyso taraafikada xaafaddaada iyo, waxaan rajeynayaa, baarkaaga. Ku dar tan dallacsiinta (Nagu sawir sawir leh geofilter-ka oo loo galo si aad ugu guuleysato cabitaan bilaash ah, iwm.) Waxaadna noqon kartaa joornaal baraha bulshada oo leh tirakoobkaaga wanaagsan bilo gudahood.
Kali keli kuma aha tan, sidoo kale. Snapchat dhab ahaantii wuu leeyahay loo adeegsaday Geofilters si ay uga xadaan injineerada Uber, malahaygana waa inaysan halkaa ku hakanayn. Waxaa jira tan oo codsiyo tiknoolajiyaddan ah, waa inaad diyaar u tahay inaad tijaabiso.
Dhammaan tani runti waxay ku soo biyo shubanaysaa hawlgelinta. Snapchat ma kala duwana, waa cusub. Haddii aad u siiso dadka isticmaala khibrad aad u fiican iyo hab fiican oo aad ku xirto oo aad ku lug yeelatid, waad guuleysan doontaa. Noocyo badan oo B2C ah oo raadinaya inay ku lug yeeshaan dad da 'yar, tani waa ikhtiyaar weyn… Marka maxay dhammaantood uga baqayaan?
Haddii aad rabto inaad ka sheekeyso Suuqgeynta, Teknolojiyada, ama curadkooda, Tech Tech, waan jeclahay hadalka. Hayso sheekada oo socota Twitter oo ii sheeg waxa kale ee aad rabto inaad ka akhriso!
Tags: ugu fiicanmarketingnaqshadaynta maylkamillennialssnapchatsuuq geynta snapchat
Iyada oo leh taariikh kaladuwan oo udhaxeysa dhaqaalaha iyo majaajillada, Tim Hickle wuxuu helay guri aad ufiican goobta suuq geynta dhijitaalka ah. Maanta, Tim waa Istaraatijiyad Suuq Istaraatiiji ah oo loogu talagalay Naqshadeynta Miles. Ujeeddadiisa koowaad ayaa ah inuu ka caawiyo shirkadda sumcadda sii kordheysa inay dhisto liis ay ku bixiso adeegyo dijitaal ah oo ku saabsan khibradiisa, oo ay ku jiraan suuqgeynta gudaha, kobcinta emaylka, iyo ganacsiga bulshada.
Haddii aad rabto inaad isku xirto, xor ayaad u tahay inaad ku toogato emayl TimHickle@gmail.com ama ku xir Twitter TwitterTimHickle